विश्व जगत कोरोना पीडित जनतालाई कसरी बचाउने भन्ने छटपटीमा लागेको छ । अक्सिजन र अस्पतालको जोहोमा जुटेको छ । मानवीय सहयोग र सहकार्यमा लागेको छ । नेपालमा यस्तो केही छैन ।
नेपाली नेताहरू सत्ता झगडामा लागेका छन् । सरकार २५ जनाभन्दा बढी जम्मा नहुनु भन्छ र आफै भीडमभीड गरेर उद्घाटन, शिलान्यास, पूजा, जमघट गरिरहेको छ । भ्यूटावर, सिमेन्टको फूल, करूवा,रथयात्रामा समेत समय बिताइरहेको देखिन्छ । अचम्म यति नै बेला सीतारामको मूर्ति राजधानीबाट ठोरी पु¥याएर ठूलै तामझाम, भेला र आस्था पनि देखाइयो । अचम्म छैन त ? कोरोनाको अर्को लहरले गाउँ, समाज, सहर र देशलाई गाँजिसकेको छ । संक्रमित र मृत्युदर ह्वात्तै बढेर गएको छ । अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरूले बेड पाउन छाडेका छन् । अक्सिजन, स्वास्थ्यकर्मी, उपचार, औषधि, भेन्टिलेटर, आइसीयु पाउन छाडिएको छ । यो अवस्थामा कसरी जनतालाई बचाउने भन्ने सोच र बहस भइरहेको छैन । आखिर लोकतन्त्र यतिबिघ्न सत्ताकेन्द्रित किन भइरहेको छ ?
राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएर गर्जिरहेका बाघहरू जुधेको कति हेर्नु ? लोकतन्त्रमा लोक गर्जिन सकेनन्, असललाई असल र खरावलाई खराव भन्न सकेनन्, बाघहरू मांसाहारी भएर गर्जिरहन पाएका छन् । सार्वभौम जनताले चाबुक लगाउन नसकेर यी बाघहरू अहंकारी बनेका हुन् । यथार्थमा यी कुनै पनि बाघ होइनन् । जो छन्, कालाम्मे छन् । यिनका बिगत र वर्तमान सफा देखिदैनन् । तैपनि विवेकशील कार्यकर्ता यिनकै पछि लागेका छन्, पार्टी कार्यकर्ता बनेर नागरिक पनि विवेकहीन बनिरहेका छन् । विवेकहीनता भनेको जंगलीराज हो । कुनै पनि अर्थमा यो विधिको शासन होइन, विधिको शासन गर्ने नाममा लोकतन्त्रलाई यी कथित बाघहरूले देश र जनता चुस्ने पञ्जापत्र पाएजस्तो गरेका छन् । आमनागरिक अब ब्यूँझनुपर्छ र भन्नुपर्छ– जनताप्रतिको जिम्मेवारी, समाजप्रतिको जवाफदेहिता राजनीतिक क्षेत्रले किन देखाउन सकेन ?
वेष्ट मिनिस्टर प्रणाली हो लोकतन्त्र भनेको । यो उच्चतम प्रणालीमा नैतिक आचार र इमान प्रमुख विषय हुन्छ । २०६३ सालदेखि २०७८ सालमा आईपुग्दासम्म नैतिकता, आचरण र लोकलज्जा भन्ने कसैले पनि पालना गरेको देखिएन । नेपालमा फोहरको कन्टेनर प्रणाली देखियो, जसलाई हामी लोकतन्त्र भनेर फलाकीरहेका छौं । लोक सहभागिता कतै पनि छैन । लोकतन्त्र दिवस, संविधान दिवसमा समेत लोकको सहभागिता हुँदैन । जो समाजमा गनाएका छन्, तिनैलाई सम्मानित गरिन्छ, मानपदवी दिइन्छ र स्कूले बालबालिका, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी बोलाएर दिवस मनाउने पनि लोकतन्त्र हुन्छ ? यसको अर्थ लोकप्रति लोकनेता भनिनेहरू बाँधिएका छैनन्, लोकले यो पद्धतिलाई अपनत्व स्वीकारेकै छैनन् । यसैले त कोरोनाको महामारीमा पनि राज्य हाँसिरहेछ, उत्सव मनाइरहेछ ।